Fraport inoburitsa RFP yemitambo / yakawanda-inoshanda horo kuFrankfurt Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Fraport inoburitsa RFP yemitambo / yakawanda-inoshanda horo kuFrankfurt Airport
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Dhinda Zviziviso • Kutarisirwa • Sports • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Fraport kuburitsa chikumbiro chezvaunofunga (RFP) kuti uongorore kufarira kwemusika mukuvakwa kwemitambo / imba yemahara pane imwe nzvimbo isina vanhu paFrankfurt Airport. Iyo purojekiti chikamu cheimwe hombe yedhorobha yekuvandudza chirongwa. Iyo plot iri kutaurwa iri pakati nepakati seri kweiyo squaire kupaka garaji, uye inoumbwa ingangoita 30,000 m2.
Chinangwa cheRFP ndechekutsvaga vangangoita mari nevashandisi vanogona kuronga, kuvaka nekumhanyisa nzvimbo nyowani - mukubatana pamwe neFraport neGuta reFrankfurt, pamwe nemasangano ehurumende, masangano emabhizimusi nemamwe mabhizinesi. Chinangwa ndechekugadzira nzvimbo ine chinzvimbo chakakodzera kuitisa makwikwi epamusorosoro epamba uye epasirese emitambo, pamwe nemakonzati uye zviitiko zvetsika.
Felix Kreutel, Head of Real Estate Management kuFraport, anotsanangura kuti: "Tinoda kutanga taziva kana paine kufarira pakati pevangangodaro vatambi vekutengesa mukugadzira, kuvaka nekushandisa horo yemitambo uye ine mabasa akawanda. Nzvimbo yakadai yaizowedzera chimwe chinhu chinonakidza kuchikwereti chedu kuFrankfurt Airport. ”